Kunyorwa kweBumbiro Idzva Kokonzera Mutauro Pakati peZanu PF neMDC-T
Zvita 19, 2011
Komiti yeparamende inoona nezvekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCOPAC yaita musangano wechimbi chimbi neMuvhuro muHarare mushure mekunge Zanu-PF yanyora tsamba kune vanhu vakapihwa basa rekunyora bumbiro idzva kuti vambomira kuita izvi nekuti haisi kufara nebasa ravo.
Zanu-PF iri kuti vanhu ava vari kuchinja zvinhu zvakabuda muvanhu zvinosanganisira kuti vanhu vave nekodzero dzekuva nehugari mudzimwe nyika, kana kuti dual citizenship.
Asi sachigaro veZanu-PF muCOPAC, VaPaul Mangwana, vaudza bepanhau reHerald kuti vari kuda kuti pave nevanyori vatsva nekuti varipo pari zvino vari kuita zvido zveMDC.
Asi sachigaro weMDC inotungamirwa naVa Morgan Tsvangirai, Va Douglas Mwonzora, vanoti vari kufara nebasa raitwa kusvika pari zvino nevari kunyora bumbiro idzva.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC-T muCOPAC, Amai Gladys Dube Gombami, vanoti musangano wavo uchaendera mberi neChipiri, vachiti bato ravo harisi kubvuma kuti nyanzvi dziri kunyora bumbiro idzi, dzichinjwe.
Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari sachigaro veNational Constitutional Assembly, VaLovemore Madhuku, vanoti zviri kuitika zvinotsigira mashoko avanogara vakataura kuti bumbiro idzva iri rinofanhirwa kunyorwa nevanhu vasiri kuita zvematongerwe enyika.
Sangano raVaMadhuku rakakurudzira veruzhinji kuti varambe kutambira bumbiro rakanga ranyorwa nehurumende mureferendamu yakaitwa muna Kukadzi 2000.
Sangano iri rinoti richakurudzira zvakare kuti veruzhinji varambe kutambira bumbiro idzva riri kunyorwa richiti zviri pachena kuti zvido zvevanhu hazvisi kukosheswa.
Hurukuro naAmai Gladys Dube Gombami